Ii-AirTag zigcina umhla wama-30 ku-Epreli kunikezelo | Ndisuka mac
Ii-AirTag zigcina umhla wama-30 ku-Epreli kunikezelo
Phambi kokuba siqale kufuneka sitsho Eli nqaku lisungulwe kwangolo suku lunye ngoAprili 23, ngumhla ekuvulwe ngawo ukubhukisha Kwiivenkile ezikwi-Intanethi ezikwi-Apple, kanye ngoku ngo-18: 00 emva kwemini eSpain ukubhukisha kwezi AirTags kuyaqhubeka nokubonisa umhla wokuhambisa ngo-Epreli 30, kodwa xa usongeza umbhalo, umhla wokuhambisa uyatshintsha kude kube ngumhla we-15.
Ngokusengqiqweni, abasebenzisi abafunda eli nqaku kwiintsuku ezizayo kunokwenzeka ukuba lo mhla uyahluka. Inkampani yaseCupertino ibonakala iphumelele ekusunguleni ezi zixhobo ze-locator kubasebenzisi bayo.
Abasebenzisi abangakhange bathenge okanye babeke bucala kwezi Sertax ekuqaleni kogcino baphumelele imihla yokuthumela ngolwesiHlanu omnye kuAprili 30, ke ibango lenyuke ngokubonakalayo iiyure ezisemva.
Uninzi lwabantu esibaqhelileyo esilubuzayo kunye nabasebenzisi abaninzi abakhoyo ngaphakathi kwejelo leTelegram #todoApple Sele belindele ukufika kwee-AirTag zabo ezintsha. Ngale ndlela, kubonakala ngathi isixhobo siyathandwa kwaye ubuncinci ukuvavanya abasebenzisi abaninzi banqume ukuyithenga. Kukho izixhobo ezifanayo kwimarike kodwa inyani kukuba ezi zivela kuApple banayo yonke into oyifunayo ukuvusa umgangatho wenzala kunye nexabiso elifanelekileyo.
Ngoku silindele ukuba izixhobo zingene ezandleni zabo bonke abathengi. Uninzi lwabo luya kubamkela ngoLwesihlanu olandelayo we-30 kwaye abanye kuya kufuneka balinde ithutyana kodwa ngokuqinisekileyo ukuba baya kwiVenkile ekufuphi yeApple banokuyifumana. Uyifumene eyakho? Kuya kufuneka kwakhona ukuba amaxesha amaninzi le mihla yokuhanjiswa ihambele phambili kwiimveliso zeApple, ngokungangqinelaniyo ingeyiyo imihla ecwangciselwe u-Epreli 30 ukuba ayikho kwezi zilandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ii-AirTag zigcina umhla wama-30 ku-Epreli kunikezelo
Hayi, iApple ayicwangcisi ukuguqula i-iPad ibe yiMac
I-AliveCor ifuna ukususa umsebenzi we-ECG kwi-Apple Watch e-US ngolwaphulo mthetho